KUTHENI UKAILYN LOWRY ESIXOLISILE ESIDLANGALALENI KUDEMI LOVATO - IINDABA
Kutheni uKailyn Lowry axolise esidlangalaleni kuDemi Lovato
Umama omncinci 2 inkwenkwezi uKailyn Lowry waxolisa emva kokuba enze impazamo xa wayethetha ngoDemi Lovato. Umntu we-MTV wayebhekisa kwimvumi engeyiyo eyambini njengoko yena, nangona uLovato kwakhankanywa ngaphambili ukuba bayazithanda / izimelabizo.
Kutshanje u-Lowry walungisa owayesakuba sisithandwa sakhe, uChris Lopez, ngokubhekisa kuye njengoko / bona.
U-neil patrick harris imvumi efihliweyo
Ndiva ngathi yayizolo okanye usuku ngaphambi kokuba ndifumane uChris apha ngokufanelekileyo kwizimelabizo zam. Izimelabizo zam 'ngu' yena 'no' yena. Uhlala endibiza 'bona,' ukhankanyiwe uLowry, odume ngePhepha lesiThandathu. Ukwazi ukuba oko kugqityiwe kum, ndazibamba ndibhekisa kuDemi Lovato kwisiqendu sanamhlanje njengo 'yena' kwaye 'yena' xa isimelabizo sakhe [sic] sithi 'bona.'
Ngomhla ka-Meyi ka-2021, u-Lovato watyhila ukuba ugqibile ukuzibonakalisa kwakhe kunye nomsebenzi wokunyanga kwaye waqonda ukuba ayingobanambali. Ndifumene isityhilelo endisinqumayo njenge-non-binary. Ngale nto ikhankanyiweyo, ndiza kube nditshintsha ngokusesikweni izimelabizo zam kubo, uLovato ukhankanywe kwi-podcast yabo, i-4D kunye noDemi Lovato, ngabantu. Ndivakalelwa kukuba le nto inkulu ibonisa ubumdaka endibuva kwisini sam kwaye indivumela ukuba ndizive ndinyanisekile kwaye ndiyinyani kumntu endimaziyo ukuba ndinguye, kwaye nangona kunjalo ndiyafumanisa.
U-Lowry ufuna 'ukwenza ngcono' ngaphakathi kwikamva
I-Lowry, i-29, inike uxolo ku-Lovato emva kokubathobela.
Ke, ndilapha nje ndilapha ukuzokuxolisa kwaye nditsho, ukuqhubela phambili, ndinqwenela ukwenza ngaphezulu. Ndinqwenela ukuhlonipha abantu kwaye zithini izimelabizo zabo kwaye ngokulula nje, ngathi, cela abantu ukuba baqhubele phambili, utshilo. Ndiyathemba, xa umamele, uyakuchaphazeleka umntu kunye nam ngenxa yokuba ndinqwenela ukwenza ngokufanelekileyo kwaye ndinqwenela ukufumana izimelabizo zomntu wonke ezifanelekileyo.
Umama wabantwana abane usonge i-mea culpa ngokuthembisa ukuzisebenzela kungekudala okanye kamva. Ndicela uxolo ngokunyanisekileyo kwaye ndiza kwenza phezulu shifting phambili, ugqibile.
ULowry wabelana ngabantwana ababini noLopez, unyana oneminyaka emi-4 uLux kunye nonyana oneminyaka eli-1 ubudala uCreed. Ukwangaphezulu unonyana oneminyaka eli-7 ubudala, uLincoln, kunye nomyeni wakhe owayengumyeni uJavi Marroquin kunye nonyana oneminyaka eli-11 ubudala, u-Isaac, kunye nesoka lakhe langaphambili uJo Rivera.
I-Lopez ibizwa ngokuba yi-Lowry 'Bona' xa bethetha ngezityholo zeFat-Shaming
U-Lowry utyhola u-Lopez ngokumhlazisa ngamafutha kumyalezo wokubhaliweyo, isityholo sokuba uLopez wakhanyela ukuhlala kwi-Instagram. Ngelixa wayethetha nge-ex yakhe, wabhekisa kwi-Teen Mom 2 star njengabo.
Ukuba bakhubekisiwe yile bayikhankanyileyo, ngoko ndiyingozi. Yeka ukuthetha s ***, waqhubeka. Yindlela endijonge ngayo kule ***. Andikhathali.
Megyn kelly Umyeni wokuqala
U-Lopez wayengenqweneli ukwabelana ngesicatshulwa sakhe somxholo wesicatshulwa kunye nabalandeli. Ndiyayiqonda into endiyithethileyo.Ndiyibonile into endiyibhalileyo kwaye yiyo, utshilo. Ukuba abayingenisanga into abayikhankanyileyo, yiyo loo nto bhuti. Ndizoyithatha ngeloxesha. Andilunganga apha ukudlala i-tit for tat. Andizukungenisa into abayichazileyo.
Ngexesha lokuqala ukusukela oko uLopez ekwi-Lowry, watyikitya isivumelwano kunye neMTV ukujonga ixesha elitsha kraca. U-Lowry ubanga ukuba akayikhathalelanga i-ex yakhe ukuba ikulomdlalo, nangona kunjalo wayekhathazekile kukuba i-MTV ingamazisanga kuqala.
Andikuniki enye f *** into eyenziwa nguChris, wabhala, isekwe kwiscreen ekwabelwana ngaso kwiReddit. Ndiyikhathalele indlela ekwenziwe ngayo ngayo / indlela endize ngayo kunye nokunqongophala kwentlonipho yabantu kum emva kweminyaka eli-12 yokwenza lo mboniso.
Izigaba: Inetflix Iwiki Tech-Iindaba
Uluhlu lwamagama ehotele
i-vin yedizili ihlawulela enkulu
Unxweme olusentshona iminyaka emitsha ngaphambi kokubala ixesha lokuphila
I-erica mena net ixabisa i-2015
samantha ravndahl net efanelekileyo
dunkin gcina ukuvota
iziphumo zokudlala kwelizwi